Page3– Nepali News & Entertainment
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेल तेस्रो शक्तिका रुपमा देखिए । उनले १४ हजार सात सय २८ मत ल्याएका छन् । गठबन्धनका सामु नेकपा एमाले दोस्रो शक्तिका...
काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको अन्तिम नतिजा आउनै लाग्दा महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अघोषित जित हासिल गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेको पकड क्षेत्र मानिएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित...
काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको मेयरमा जित सुनिश्चित भएपछि धन्यवाद दिएका छन्। उनले बुधबार फेसबुकमा लेख्दै आफ्ना मतदाता, समर्थक र निर्वाचनमा सामेल भएका सबैलाई धन्यवाद दिएका हुन्। मतदाताहरूले आफूलाई काठमाडौं महानगरको...
काठमाडौं । देशका ६ मध्ये ५ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार हारिसेकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा रहेर प्रतिष्पर्धामा छन् । एमालेले ५ महानगरपालिकाको मेयरमा हार व्यहोरिसक्दा...
एउटा अनौठो घटनामा दक्षिण सुडानमा एउटा भेडालाई एक महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । सुडानको आई रेडियोका अनुसार यस महिनाको सुरुमा दक्षिण सुडानमा ४५ वर्षीय अधियु चापिङलाई...
काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको जित सुनश्चित भएको छ। अब २२ हजार ५६४ मत गणना हुन बाँकी रहँदा बालेनको सत्ता गठबन्धन तर्फकी उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले आफ्नो...
स्थानिय तहको निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केहि पार्टीहरुले अपेक्षाकृत परिणाम पनि निकाल्न सकेका छैनन् भने केहि पार्टीले भने चुपचाप कमाल गर्न सफल देखिएका छन् । फरार अवस्थामै उमेदवारी...
काठमाडौँँ– ब्यूटी प्याजेन्टको सक्सेस पार्टीको क्रममा आयोजकले आफूमाथि बलात्कार गरेको घट्नामा तानिएकी पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले प्रहरी समक्ष बयान दिएकी छिन्। उनले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेर बलात्कार आरोप लागी पक्राउ...
काठमाडौ । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो ।यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित गरियो । तर भारतले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । तर यो भुमि...
विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने !
१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत कानुन गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘आधुनिक...
Previous 1234567 8 … 1,891 Next